Louis van Gaal Oo Magacaabay 10 Xiddig Oo Uu Dalbaday Waqtigii Uu Manchester United Joogay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaLouis van Gaal Oo Magacaabay 10 Xiddig Oo Uu Dalbaday Waqtigii Uu Manchester United Joogay
Louis van Gaal Oo Magacaabay 10 Xiddig Oo Uu Dalbaday Waqtigii Uu Manchester United Joogay
April 29, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Tababaraha reer Netherlands ee Louis van Gaal ayaa shaaciyey magacyada toban laacib oo uu dalbaday in loo keeno waqtigii uu joogay Manchester United laakiin dhamaantood aanu midkoodna helin.
Louis van Gaal ayaa loo magacaabay tababaraha Manchester United xagaaga sannadkii 2014 isagoo beddelay isagoo beddelay David Moyes oo muddo kooban ku waayay shaqadiisa kaddib markii uu xilka ka dhaxlay Sir Alex Ferguson.
Van Gaal ayaa yimid Old Trafford isagoo doonaya in uu horyaalka Premier League ku samaysto sumcad la mid ah tii uu hore uga soo helay kubadda cagta, laakiin damaciisa ayaa kusoo dhamaaday muddo kooban, waxaana lagu beddelay Jose Mourinho.
Markii uu soo dhamaaday Koobkii Adduunka 2014 ee uu waddankiisa Netherlands wacdaraha ka dhigay, ayaa uu Van Gaal oo amaan badan kusoo helay sidii uu xulka qarankiisa iskugu dubba-riday, waxa uu usoo dhaqaaqay Manchester United, waxaana uu dalbaday in loo keeno ciyaartooyo waaweyn si uu kooxda guul u gaadhsiiyo laakiin midkoodna ma helin.
Toban ciyaartoy ayaa safka hore kaga jiray liiska xiddigaha uu Van Gaal doonayay in uu la saxeexdo, kuwaas oo aanu midkoodna helin.
Isagoo la hadlayay wargeyska FouFourTwo, waxa uu Van Gaal yidhi: “Waxa aan doonayay Robert Lewandowski laakiin markii ay noo caddaatay in ay adag tahay, waxa aanu isku daynay Gonzalo Higuain.
“Ka hor intii aanan imanin ayaan boodhka maamulka kooxda kala hadlay Neymar. Haddii aad tahay United, waa in aad wax weyn ku fikirto. Isaga naf ahaantiisa ayaa xiisaynayay kooxda marka laga eego iibka shaadhasha, aniguna waxaan doonayay garabyo degdeg badan. Sababtaa darteed, waxa kale oo aan isku dayay Sadio Mane iyo Riyad Mahrez.
“Thomas Muller ayaa sidoo kale ku jiray liiska doonistayda, waxa kale oo aan doonayay N’Golo Kante. Xataa waxa aan isku dayayin aan lasoo saxeexdo James Milner oo da’ ahaa laakiin boosas badan ka ciyaarayay, lahaana xirfad hoggaamineed.
“Difaaca, waxa aan doonayay Sergio Rasos iyo Mats Hummers, sababtoo ah difaacyagu ma ahayn kuwa ugu hoggan ee dhismaha khadka dambe.
“Kuwaas ayaa ahaa ciyaartoyda ugu sarreeyey bartilmaameedkayga, laakiin midkoodna maan helin. Ma garanayo sababtoo ah anigu tababare ahaan qayb kama aanan ahayn wada-xaajoodyada. Kaddib markii aan ka tegay, ciyaartoyda sida Mahrez iyo Kante waxay ku dambeeyeen Manchester City iyo Chelsea, halka United aanay midkoodna helin, aad ayaan uga xumaaday.”
Louis van Gaal ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee Manchester United, waxa uu lasoo saxeexday ciyaartooyo badan, sida Angel di Maria, Ander Herrera, Marcos Rojo, Daley Blind iyoTimothy Fosu-Mensah, halka goolhayihii Barcelona ee Victor Valdes uu yimid January 2015.
Xilli ciyaareedkiisii labaad, waxa uu keenay Memphis Depay, Matteo Darmian, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin iyo Sergio Romero.